Matoky ny Soratra Masina
"Ary izao no tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra" — Gen. 2:4.
Ry zareo mpandinika ny tany dia mihambo ho mahita porofo hanamarinany fa taloha ela noho ny voalazan' i Mosesy no nisian'ny tany. Ny taolan'olona, ny taolam-biby, ny fiadiana, ny hazo lo, sns, izay hitany, ary lehibe lavitra noho ny fahita ankehitriny, na noho ireo fahita taona an'arivo maro Lasa izay, no entiny ilazana fa nisy mponina ela talohan'ny fotoana voalazan'ny famoronana ny tany, dia mponina izay vaventy sy lava lavitra noho ny olona ankehitriny. (...)
Tsy afaka hanaporofo na inona na inona ny sampam-pahalalana momba ny toetran'ny tany (géologie), raha manao tsinontsinona ny tantara voalazan'ny Baiboly. Izay rehetra manohana ny fampianarana sy fanambarana avy amin'izany sampam-pahalalana izany, dia tsy mba mahazo an-tsaina izay hangezan'ny olona sy ny biby mbamin'ny hazo talohan'ny safodrano, na maheritreritra ny loza amin'antambo izay niseho. Ireo zavatra nilevina (fossiles) hita any anaty tany dia porofo manamarina fa nisy fiainana fahizay, dia fiainana hafa lavitra noho ny fiainan'ny olona ankehitriny. Ny tantara masina irery izany no hany afaka manambara ny fotoana nisian' izany. (...) Tamin'ny andron'i Nôà dia nisy olona, biby, hazo vaventy lavitra noho izay fahita ankehitriny, izay samy ringana sy voatototra, ka voatahiry any anaty tany. Ny antony nitehirizana azy ireny toy izany, dia mba ho vavolombelona amin'ny taranaka mandimby rehetra, fa nisy tokoa ny safodrano izay nandringana azy rehetra. Tian' Andriamanitra hoentina hanamarinana ny Soratra Masina ny fahitana ireny zavatra voalevina ao anaty tany ireny. Indrisy anefa, noho ny hevi-poana, dia latsaka ao amin'ny fahadisoana izay efa nahavoa ny mponina talohan'ny safodrano ny olona. (...)
Anankiray amin' ny hafetsena ampiasain' i Satana ny fanafenana indrindra ny didin'Andriamanitra izay tena mazava; ary amin' izany, dia manosika ny olona hiroso eo amin'ny lalan'ny tsy finoana izy, mba hahatonga azy ho sahisahy eo amin'ny tsy fankatoavana an' Andriamanitra. Ny didy fahefatra indrindra no nokendren'ilay fahavalo hasiana mafy, dia ilay didy manambara marimarina fa Jehôvah, Andriamanitra velona, no Mpanao ny lanitra sy ny tany. (...) — PM, tt. 92-94.